अलमुताइरी राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका नयाँ प्रशिक्षक – ThePressNepal
काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल‌ बनाउने
अबको तीनहप्ता निकै कष्टकर हुने डा रविन्द्र पाण्डेको चेतावनी
सवैमिलेर यो कठिन स्थिति पार गरौ! फेरी सुनौलो बिहानी अवस्य आउने छ – जिवाणु विज्ञ, डा. सन्तोष दुलाल
सवैमिलेर यो कठिन स्थिति पार गरौ! फेरी सुनौली बिहानी अवस्य आउने छ – डा सन्तोष दुलाल,जिवाणु विज्ञ
राजनीति पछि गरौला महामारीमा सबै राष्ट्रिय शक्ती एक हौं: अध्यक्ष थापा
अलमुताइरी राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका नयाँ प्रशिक्षक
काठमाडौं,चैत २२ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले कुवेतका अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ ।
एन्फाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अलमुताइरीले १ वर्ष राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जानकारी दिएको छ ।
अब्दुल्ला प्रो लाईसेन्स होल्डर र एएफसी कोचिंग प्रशिक्षक हो। राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षक प्रो लाइसेन्स प्राप्त हुनु पर्ने नयाँ नियम ल्याएपछि एन्फाले अलमुताइरीलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो । अलमुताइरी कतार फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आएका हुन् । उनलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को टेक्निकल कमिटीले सिफारिस गरेको थियो।
उनी थ्री नेसन्स कप अघि नै नेपाल आएका थिए । उनको स्थानीय खर्च एन्फाले बेहोर्ने छ भने बाँकि सबै आर्थिक जिम्मेवारी कतार फुटबल संघले लिएको छ ।
अब्दुल्लासँग कुवेत र साउदी अरेबियाका क्लबहरूसँग पहिलेका अनुभवहरू छन्। उनले किर्गिजस्तान यू -१६ टीमका प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्।
अब्दुल्लाले भने कि उनी खुशी छन् र कामलाई चुनौतीको रूपमा लिन्छन्। "नेपालमा काम गर्न पाउँदा म खुसी छु  म यो कामलाई चुनौतीको रूपमा लिन्छु र हाम्रो खेलसँगै सबै नेपाली समर्थकहरूलाई खुशी पार्न आशा गर्दछु," अब्दुल्लाले भने।
कोच अब्दुल्लाले भने कि उनले खेलाडी र देशको राम्रोसँग अध्ययन गरेका छन्। "मैले टोलीलाई तीन राष्ट्र कपमा खेलिरहेको देखेको थिएँ। हामीसँग खेलाडीहरूको राम्रो पोखरी छ र आशा छ कि हामी तीनवटा राष्ट्र कप कप च्याम्पियन जस्ता धेरै अवसरहरूमा मनाउन सक्छौं," कोचले भने।
Tags: अलमुताइरी पुरुष फुटबल
Previous विश्व च्याम्पियनको स्मृतिमा पावर लिफ्टिङ हुने
Next कर्जा भन्दा निक्षेप २ अर्ब बढी
नेपाल सुपरलिग:काठमाडौंलाई हराउदैं धनगढी फाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं उपत्यकामा उपभोग्य वस्तुको पसल बिहान १० बजेसम्म खोल्न पाइने
उपत्यकामा कोरोनाको भयावह अवस्था, काठमाडौं जिल्लामामात्र	हालसम्म १ लाख ४७ हजार संक्रमित